संस्कार होस् त उपमेयर नेपालको परिवारमा जस्तो ! - Welcome Satakshidham
संस्कार होस् त…
संस्कार होस् त उपमेयर नेपालको परिवारमा जस्तो !
भनिन्छ, संसार बदल्नु छ भने आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । समाज बदल्नु छ भने आफ्नै परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ । तर, यो आहानलाई पछ्याउने कमै छन् ।
झापाको शिवसताक्षी नगरमा भने एउटा यस्तो परिवार छ, जहाँ श्रीमानले श्रीमतीलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्छन् । सासुससुराले पनि बुहारी ाई तपाईँ नै भन्छन् । यो परिवारले आफैंबाट परिवर्तनको सुरुवात गरेको छ ।
यो परिवारमा तपाई सम्बोधन नयाँ होइन । बाबुआमाले पनि छोरा र नातिनातिनालाई तिमी भनेर वोलाउनु पर्छ । छोरीलाई तपाई नै भन्नुपर्छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालको घरमा चलिआएको सम्बोधन शैलीको विषय हो यो ।
नेपालको घरमा बिहान ५ वजे पुग्दा श्रीमान गंगाराम (६३) कुचो लगाउँदै थिए ।
‘मेडम हुनुहुन्न ?’
वेलकम सताक्षीधामकर्मीले जिज्ञासा राख्दा उनले सकरात्मक भाव देखाए । बैठक कोठा लैजाँदै गर्दा उनले भने, ‘बस्दै गर्नु न उहाँ वाथरुममा हुनुहुन्छ ।’
एकैछिनमा भित्र ढोकाको आवाज सुनियो । अनि, गंगाराम बोले, ‘मेडम हजुरलाई भेट्न एक जना सर आउनु भएको छ ।’
यो संवाद सुनेर हामीलाई केही अस्वभाविक महसुस भयो ।
‘सर हजुरले मेडमलाई तपाई भनेर सम्वोधन गर्नुभयो, तपाईहरु श्रीमान–श्रीमती होइन र ?’
उनले मुस्कुराउँदै सहजै जवाफ फर्काए, ‘हो । तर, मैले उहाँलाई तपाईँ वाहेकका शव्द लगाएर बोलाएको छैन ।’
बुझ्दै जाँदा यो संस्कार नेपाल परिवारलाई तत्कालीन मालेले सिकाएको रहेछ । सम्बोधनमा मात्र होइन, घरको कामकाज पनि श्रीमान श्रीमती दुवैले पालैपालो गर्ने चलन यो परिवारमा छ ।
‘कुचो लगाउने, लुगा धुने, खाना पकाउने, भाडा वर्तन माझ्ने लगायतका काम मिलेर गर्छौ’, उनले थपे, ‘उहाँले र मैले गर्ने भन्ने छुट्टाछुट्टै छँदैछैन ।’
श्रीमती प्रायः नगरपालिकाको काममा व्यस्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय समय घरको काम सबै आफैंले गर्ने गरेको सुनाए ।
नगरको उपप्रमुखको जिम्मेवारी अगाडी उनी राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । श्रीमान पनि शिक्षण पेशमा संलग्न थिए । दुवै जना मिलेर घरको काम सके वेलैमा निस्किन पाइन्थ्यो ।
अहिले अवकाश पाइसकेपछिको समयमा उनले श्रीमतीलाई मजाले सहयोग गर्ने समय पाएका छन् ।
झापा साविक धाइजन–७ हाल मेची नगरपालिका वडा नम्बर १० निवासी भिमबहादुर र डिकुरादेवी दाहालकी जेठी छोरी भोजकुमारीलाई बा—आमाले पनि तिमी भनेर बोलाउने गरेका थिए ।
बाल्यकालको संस्कारले विवाहपछि पनि नेपालको घर परिवारमा त्यही संस्कार भित्रिएको थियो । जुन यतिवेला पनि कायमै छ ।
२०१८ सालमा जन्मिएकी उपमेयर नेपाल सरल र मिजासिलो स्वभावकी छन् । कक्षा १ देखि ३ सम्म साविकको स्थानीय भानु प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी उनले उनले ४ देखि ७ कक्षा धाइजनको वलभद्र माविमा अध्ययन गरिन् ।
‘अध्ययन अध्यापनमा अव्बल नै थिएँ । सायद त्यसैले होला बुबा मुमाले मलाई कक्षा १० सम्मको अध्ययनका लागि धुलाबारी मावि स्थानान्तरण गर्नुभयो’, उनी भन्छिन् ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिप्रति रुचि राखेकी उनी वैवाहिक जीवनपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन पाएकोप्रति गौरव महसुस गर्छिन् । भन्छिन्, ‘परिवारको साथ थिएन भने यहाँसम्मको यात्रा कल्पनै गर्न सकिन्थ्यो ।’
२०३६ सालमा साविकको सतासीधाम गाविस वडा नम्बर ६ का गंगारामसँग परम्परागत रुपमा उनको विवाह भएका थियो । यतिवेलाको जस्तो दुलाहा हेर्ने, कुरा गर्ने चलन त्यसवेला नभएको उनी सम्झिन्छिन् ।
भन्छिन्, ‘त्यतिवेला बुबाआमाले भनेको मान्नुको विकल्प हुँदैनथ्यो । तर, सायद गंगा सरसँग मेरो विवाह नभएको भए, आज म जे छु, त्यो हुने थिइन होला ।’
‘शिक्षकले राजनीति गरेको पञ्चायतले रुचाउँदैन थियो’, नेपाल भन्छिन्, ‘त्यसैले पनि उहाँले मलाई राजनीतिमा अघि बढाउनु भयो । गंगासर दिनभर विद्यालयमा विद्यार्थी र राती राती कार्यकर्ता पढाउने गर्नुहुन्थ्यो ।’
विवाह अघि पार्टीको जिम्मेवार तहमा नरहे पनि विवाहपछि भने गंगा सरकै सहयोगमा पार्टीका केही सम्हालेको उनलाई याद छ ।
‘झापा आन्दोलन भनेर चिनिने ०३६ सालको किसान आन्दोलनका वेला दिनमा मेरो नेतृत्वमा पञ्चायतविरुद्ध अभियान चल्थ्यो भने घाम अस्ताएपछि गंगा सर नेतृत्व गर्नु हुन्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘कतिपय रात्री कार्यक्रममा मलाई पनि उहाँले सँगै लैजानहुन्थ्यो ।’
परिवारको साथमा उपमेयर नेपाल ।
गंगा सरको असल अभिभावकत्वका कारण आफूले उचित समयमा उचित जिम्वेवारी पाएको उनले बताइन् ।
निर्दलीय समर्थकले उनका कुरा काट्थे त्यसताका । राति राजनीतिक सभा समारोहमा महिला हिँडेको रुचाउन्न थियो समाजले ।
तर, गंगा सरले सामन्ती र शासकविरुद्धको आन्दोलन छेड्न महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।
उनले गायनको माध्यमबाट पनि शासनविरुद्धको लडाइँमा होमिएका अन्यलाई उर्जा थपिन् । ‘मैले जनवादी गीत गाएर आन्दोलनमा सहभागीलाई मनोरञ्जनका साथै उनीहरुमा उर्जा थप्थे’, नेपालले भनिन् ।
जेवी टुहुरे, शम्भु राई, चन्द्र भण्डारी, उमेश राई लगायतका कलाकार त्यसवेलाका चर्चित जनवादी गायक हुन् । उनीहरुको सहभागितामा नेपालले सयौं कार्य मेरो प्रस्तुति दिएकी छन् ।
गायनले नै उनलाई राजनीतिक बाटोको थप उचाइमा लगेको उनी सम्झिन्छिन् ।
पार्टीेले इमान्दार र कर्मठ महिला ठानेर सक्रिय दलको सदस्य दिएपछि उनलाई जिम्मेवारी थपिएको महसुस भयो ।
साबिकको सतासीधाम गाविस वडा नम्बर ६ को अखिल नेपाल महिला संघको नेतृका रुपमा पनि उनले पदीय जिम्मेवारी शुरु गरे ।
त्यसपछिका दिनमा चुलो चौकोमा जीवन बिताउने महिलाले नेतृत्व सम्हालेको देख्दा त्यसताका गाउँ घरमा आश्चर्य नै मान्ने गरेको उनी सम्झन्छिन् । यसले आफूलाई निडर र निर्भिक बनाएको उनी बताउँछिन् ।
तत्कालीन एमाले नेता तारासम याङ्गया, स्वर्गीय पोखराज कडरिया, दधिराम खनाल, स्वर्गीय शिव नेपाल, ओमदेव शाही र श्रीमान् गंगा सरको प्रेरणाले अनेमसंघको वडा कमिटीको नेतृत्व गरेपछि अप्रत्याशित सफलता हात परेको उनी बताउँछिन् ।
त्यसपछि साविक सतासीधाम गाविसको अनेमसंघको गाउँ स्तरीय जिम्मेवारी उनले पाए । ०४८ देखि ५८ सम्म सिङ्गो गाँउको जिम्मेवारी उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै थियो ।
उनी त्यसवेला प्याक्ट नेपाल नामक गैह्र सरकारी संस्थामा पनि काम गर्दै आएकी थिइन् । त्यहाँबाट आएकाले पारिश्रमिक पनि उनले राजनीतिक कार्यमा खर्च गर्थिन् ।
प्याक्ट नेपालले दिएको साइकलले उनलाई राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन सहजता भयो । इलाका नम्बर १२ को जिम्मेवारीसँगै उनले पार्टीको जिल्ला कमिटीसम्मको यात्रा तय गरिन् ।
झापाका दजनौं सामाजिक संघ संस्थामा पनि आवद्ध उनी साहारा नेपाल जस्तो प्रतिष्ठित वित्तिय संस्थाको सल्लाहकार समिति सदस्य छन् ।
सतासीधाम सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको संस्थापक अध्यक्ष नेपाल पारालिगल गाउँ कमिटी अध्यक्ष हुँदै जिल्ला समितिको सदस्यको समेत अनुभव उनीसँग छ ।
मेहनत र परिश्रमको फल आश नगर्ने नेपाललाई पार्टीले ईमान्दार महिला नेतृको रुपमा लिएको थियो ।
पञ्चायत विरुद्धको किसान आन्दोलन ०३६, प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलन ०४६ र राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन ०६२/०६३ मा नेपालले पुर्याएको योगदानको कदर ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेले गर्यो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा उपमेयर नेपाल ।
नेपालसहित ६ जना महिला नेतृको नाम शिवसताक्षी नगरको उपप्रमुख पदका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, पार्टीले उपप्रमुख पदको उम्मेद्वार नेपाललाई घोषणा गरेपछि उनमा खुसीको सीमा रहेन ।
०३६ सालपछिको राजनीतिक करियरमा सबैभन्दा खुसी भएको क्षण थियो उनमा । आफूसँगै सिफारिसमा परेका अन्य समेतको सहयोग, स्थानीय, पार्टी नेतृत्वको परामर्श र सल्लाहमा चुनावी मैदानमा उत्रनु आफ्ना लागि सहज भएको उनी सम्झन्छिन् ।
भन्छिन्, ‘पार्टीले कामको मूल्यांकन गरेर उपप्रमुखको उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा नतिजा उल्टो आउला भनेर कल्पना गरेकै थिइन ।’
नभन्दै उनी १४ हजार ९ सय मत ल्याउँदै शिवसताक्षी नगरको उपप्रमुख पदमा विजयी बनिन् ।
निजी विद्यालयमा मातृभाषा, अभिभावक खुशी
लालझोडा आगलागी प्रकरण : निष्कर्षमा पुगेर पनि बोल्न चाहँदैन प्रहरी !
Tags: उपमेयर भोजकुमारी नेपाल शिवसताक्षी नगरपालिका
सापकोटा वेलकम सताक्षी डटकमका सम्पादक हुन् । उनीसँग सेतोपाटी डटकमसहित झापाका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गरेको अनुभव छ ।
झापाका व्यक्तिलाई कोरोना होइन, निमोनियाको आशंका
वामपन्थीका घरैमा पसेर त्यहाँको सुसंस्कार सम्बन्धी story लेख्ने पत्रकारलाई धन्यवाद । वास्तविक पत्रकारिता यही नै हो । खोजमुलक समाचार सामग्री तयार पार्न अझै प्रेरणा मिलोस ।